बाइबलसम्बन्धी सामान्य ज्ञान Archives - परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज
बाइबल बुझ्नमा मद्दत मिल्ने पृष्ठभूमिसम्बन्धी ज्ञान सिकौं । ​
राहाब र अजिङ्गर
... के तपाईं त्यही हुनुहुन्न, जसले राहाबलाई टुक्रा-टुक्रा पार्नुभयो, र त्यस अजिङ्गरलाई वारपार छेड्नुभयो ? के तपाईं त्यही हुनुहुन्न, जसले समुद्र सुकाउनुभयो, अथाह समुद्रको पानी सुकाउनुभयो, र आफूले उद्धार गर्नुभएकाहरू पार गर्नका निम्ति समुद्रको गहिराइमा बाटो बनाइदिनुभयो ? यशै ५१:९ परमेश्वरले प्राचीन समयमा वारपार छेड्नुभएको र अन्तिम समयमा पनि वारपार…
१. ठाउँको नाउँ हिब्रू भाषामा ‘गे-हिन्नोम’ (हिन्नोमको बेँसी) र ग्रीक भाषामा ‘गेहेन्ना’ भनिने शब्द प्राचीन यरूशलेमको दक्षिण-पूर्वमा अवस्थित एउटा सानो बेँसीको नाउँ हो । यो ठाउँचाहिँ इस्राएलका राजाहरूको समयमा, प्रजाहरूले साना बालबालिकाहरूलाई आगोमा बलि गरेर आफ्नो देवतालाई अर्पण गर्ने कुख्यात ठाउँ थियो । प्राचीन समयमा, इस्राएलीहरूले अज्ञात देवता मोलोख(साँढे आकारको…
ई.सं. ३२५मा विशेष गरी एरियसवाद साथै निस्तार-चाडको विषयमा उठेको विवाद साम्य पार्नको निम्ति निकेया सम्मेलन गठन गरिएको थियो । उक्त विवादले रक्तपातसमेत निम्त्यायो, जुनचाहिँ इतिहासमा अन्धकारको अध्याय रू​पमा रहेको छ । एरियसको जिद्दी एरियसचाहिँ मिश्रको अलेक्जेन्ड्रिया मण्डलीका धर्मगुरुको रूपमा विशिष्ट पद ओगटेका व्यक्ति थिए । तिनले निम्न लिखित अनौठा सिद्धान्तहरूमा…
१. कल्दीहरूले दानिएलका ३ साथीहरूलाई अभियोग लगाएका बेबिलोनका राजा नबूकदनेसरले सुनको मूर्तिको सामु घोप्टो परेर दण्डवत् नगर्ने जोसुकै पनि तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फ्याँकिने घोषणा गरे । तापनि दानिएलका तीन साथीहरू– शद्रक, मेशक र अबेद्नगोले सुनको मूर्तिलाई दण्डवत् गरेनन् । त्यस बेला, यी तीन जनाको डाह गर्ने केही कल्दीहरूले उनीहरूमाथि…
सुसमाचारको ज्योति र बिजुली
『येशूले यी सबै कुरा मानिसहरूलाई दृष्टान्तमा भन्नुभयो । विनादृष्टान्त उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्नुभएन । अगमवक्ताद्वारा यसरी भनिएको वचन पूरा भयो: “म आफ्नो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु, संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा म जाहेर गर्दछु ।”』 मत्ती १३:३४-३५ येशूज्यूले आफ्ना मायालु सन्तानहरूका निम्ति स्वर्ग-राज्यका रहस्यहरू दृष्टान्तमा जाहेर गर्नुभयो, किनभने स्वर्ग-राज्यको ज्ञान दिइएका…